Chakavanzika chakavhurika chekuti Apple ine timu iri kushanda muchirongwa chine chekuita nemota, asi sekune zvakawanda zvezvirongwa zveApple, ruzivo rwacho rwunoshomeka. Imotokari yekuzvifambisa yega, kana kungozvifambisa otomatiki kutyaira system? Will Apple zvakapusa tenga inogadzira mota?
Muchikamu chino tinounganidza kuburitsa kwese kwazvino uye runyerekupe nezve Apple's mota chirongwa. Verenga pamusoro kuti uone nezve izvo zvave zvisina kufanira kunzi iCar, uye chii chiri kuitika kuseri kwedhiraivho kuApple.
Apple iri kuvaka mota here?
Apple ine akati wandei emapurojekiti anoitika kuseri kwezviitiko, uye chimwe chazvo chinosanganisira mota. Kunyangwe izvi zvichizoguma neApple Car ichinyatso kuburitswa kune veruzhinji haina chokwadi chekuti: kambani inogona kukwira kune software yemota (sekufunga kwayakaita kuita), kana kuburitsa mota yakagadzirirwa makambani-ekugovana makambani pane vatengi, kana ingo regedza pane icho chinhu chese nekuti chinoona isiri zano rakanaka.
Chatinoziva ndechekuti Apple - semamwe makambani mazhinji ehunyanzvi - iri kutarisa kuti tekinoroji ichawana sei nzira yayo kupinda mumotokari dzeramangwana. Iyo kambani inofarira tekinoroji iri kumashure kwekuzvityaira mota uye zvimwe zviitiko zvinonakidza munzvimbo iyoyo, uye mumwe muongorori anofunga Apple iri ingangoita mota dzacho mukati memakore mashoma anotevera. Munguva pfupi yapfuura "vanhu vanoziva nezvenyaya iyi" yakataurwa neReuters vakasimbirira kuti chirongwa chemotokari chadzoka, uye kuti mutyairi wevatengi uchave yakaburitswa mu2024 - kana kudaro, ndipo Apple painenge ichinongedzera kuvhurwa.
Iyo iCar chirongwa chave chichiitika kuseri kwezviitiko kuApple kwenguva yakareba. Kudzoka munaFebruary 2015, pakanga paine kugunun'una kuti Apple yaive ichishanda pamota iyo "yaizopa Tesla kumhanyisa mari yayo" mushure meBusiness Insider Akataura kune mushandi weApple neruzivo rwenyaya iyi. Izvi, pamwe chete nekuona mota dzakanyoreswa kuApple dzakapfekerwa nema sensors / kamera (idzo dzakazobviswa), zvakaita kuti munhu wese ataure nezve tarisiro yeApple Car, kana iCar.
Iyo iCar chirongwa chakadomwa zita Titan, sekureva kweThe Wall Street Journal, izvo zvakatanga kutaurwa paive ne "mazana emazana" Apple vashandi vaishanda pachirongwa.
A Chikumi 2017 Bloomberg indavhiyu na CEO Tim Cook vakaratidza kuti Apple yaishanda pachikuva chekutyaira chakazvimiririra. Izvi zvakatsigirwa munaNovember 2017, apo maApple maviri masayendisiti emakomputa akaburitsa kutsvagisa vachikurudzira 3D yekutsvaga system inonzi VoxelNet, iyo yavakati yaizoshanda nemazvo pakubatsira mota dzakazvimiririra kuti dzidzivise kubonderana nevanofamba netsoka nemabhasikoro.
Zvino muna Chivabvu 2018, zvakabuda kuti Apple uye VW vaifanira kushanda pamwe chete - kwete pamotokari isina mutyairi inotengeswa kuruzhinji, asi pamotokari isina mutyairi yekufambisa vashandi vayo kuenda nekudzoka kubasa. Ndihwo hukuru hwekuda kwekuzvimirira kwemotokari kwaApple?
Muna Chikunguru 2019, kesi yepamusoro yakaona iyo FBI ichibata mushandi wekare weApple ndokuvapa mhosva yekuba zvakavanzika zvekutengeserana kubva kukambani kuti vatore kumotokari yeChinese. Mhosva yacho inojekesa kuti kambani ine zvakawanda zvakaiswa mari munzvimbo, uye zviripo rumwe ruzivo pane irwo pazasi.
Kune rimwe divi, a Ndira 2019 CNBC chirevo chinoti vashandi mazana maviri muApple's autonomous system division vakagadzwa basa kupera kwaNdira, zvichiratidza kuti chirongwa cheICar chingangodaro chakakonzerwa - isu tichaenda mune izvo zvakadzama zvakare.
Chero chii chinoguma chigadzirwa, Apple yanga ichinyatso shanda ichigadzira chimwe chinhu chine chekuita nemota, ingave yakazvimiririra yekutyaira system, Apple Car kana ingori in-mota varaidzo sisitimu - kunyangwe iyo kambani isingazombobvuma chii. Tinokurega iwe uverenge humbowo hwese pazasi uye sarudza wega.
Apple iCar ichatanga rini?
Ehezve, kudzamara taona Tim Cook pachikuva achizivisa iCar, hapana anoziva kuti riini kana kana chero software inoenderana nemota kana Hardware ichazomboburitswa neApple. Mumwe muongorori, anoda Apple Television runyerekupe Gene Munster, akafanotaura kumashure mu2015 iyo 2020 yaive yekutanga isu yatinofanira kutarisira iyo iCar, uye mazhinji mapundits parizvino anofunga kuti 2023-2025 ndeyechokwadi, zvichipiwa kuti vagadziri vemota vanowanzopedza pakati pemakore mashanu neanomwe vachigadzira mota.
Sezvambotaurwa pamusoro apa, hunyanzvi hwekufanotaura hunobatana neichi chibvumirano chizere: Masosi eReuters anoti Apple iri kunangana ne2024 kuvhurwa kweICar. Izvi zvinopesana zvakanyanya ne (zvishoma zvishoma zvinogutsa) dzidziso yakabuda mazuva mashoma zvisati zvaitika, apo Economic Daily News yakafungidzira izvozvo iCar yaizotanga munaGunyana 2021. EDN haina rekodhi rekodhi kana zvasvika pakufungidzira kweApple, zvinofanirwa kutaurwa, uye isu hatina kugutsikana zvizere neiyi.
Iko Apple yakanzura yayo yakavanzika mota chirongwa?
Pamberi peReuters payakadonhedza bhomba uye ichisimbirira kuti iyo Apple Mota yadzoka, paive nepfungwa yekuti chirongwa ichi chingangodaidzwe. Maererano ne CNBC, kambani yakadzinga vashandi mazana maviri vanga vachishanda paICar pakupera kwaNdira 200, uye izvi zvakazotevera kudzingwa basa kwakafanana muna 2019.
CNBC yakaita kuti nhau idzi dzisimbiswe nemutauriri weApple uye nevamwe "vanhu vanoziva nezveboka" avo vakati vamwe vezvikwata zvehurongwa hwekuzvitonga vaizoendeswa kune mapurojekiti mune zvimwe zvikamu zvekambani, kwavanozotsigira kudzidza kwemuchina uye zvimwe zvirongwa " .
Izvi hazvireve kuti Apple yamisa basa rayo munzvimbo inodzivirira mota nzvimbo. Mutauriri akaudza CNBC kuti Apple inotenda "kune mukana wakakura nemaitiro ekuzvimiririra," uye akatsanangura chirongwa ichi se "chirongwa chinonyanya kufarira muchina kudzidza".
Zvinotaurwa naTim Cook nezveApple Mota
Apple CEO Tim Cook zvakare ndakagara pasi neBloomberg muna Chikumi 2017 kuti vakurukure kuzvimiririra kutyaira.
Achitaura nezve chirongwa ichi, Cook anoti Apple iri "kutarisa masisitimu anodzivirira" uye kuti "itekinoroji yepamoyo iyo yatinoona seinokosha kwazvo. Isu tinoronga kuzviona saamai veese AI mapurojekiti. Zvichida chimwe chezvinhu zvakaomesesa zvirongwa zveAI kunyatso shanda pazviri ”.
Ehe, Cook haigone kusimbisa kana kuramba kana Apple iri kushanda mukugadzira iCar, isina kutyaira kana neimwe nzira, kana kuti kana tekinoroji ichizoshandiswa nevagadziri vemotokari varipo. “Tichaona kwazvinotisvitsa. "Hatisi kunyatso taura kubva pachigadzirwa maonero atinozoita."
Sekureva kwaCook, Apple parizvino iri kutarisa pane zvese zvinotora kuti 'uone' nyika yakatenderedza mota uye nekunzwisisa zvazvinoreva mune yekufamba uye kuchengetedzeka.
Kunyangwe ichi chisiri chisimbiso chekuti Apple iri kushanda pamotokari yekuzvityaira, haisi kukwakuka kukuru kuita chero.
Cook zvakare akataura nezve mukana weApple Car panguva ye indavhiyu naFortune muna Kukadzi 2016. Akati: "Hatifanire kushandisa mari yakawanda kuti tiongorore."
Sezviri pachena, Apple inozo "ita" kuita chirongwa kana kambani yatanga kushandisa yakawanda mari pazvishandiso, kuwanikwa kwekambani uye mamwe maitiro (seizvo runyerekupe runoratidza kuti kambani inayo), kunyange hazvo nyanzvi dzekuhaya dzinoita sedzisina kuverenga. “Tinoongorora zvinhu nezvikwata zvevanhu. Uye icho chikamu chekuda kuziva, "akadaro Cook.
(Sezvineiwo, Elon Musk akataura kuti akapa Apple mukana wekuti ita kuwana kwakadaro muna 2017, ndokurambwa.)
Yakanga isiri yekupedzisira yakataurwa naCook nezveICar, futi. Mazuva chete mushure mekutaura naFortune, Cook akaseka vateereri kumusangano wevashandi veApple nezve zvingangoitika mune ramangwana. "Unoyeuka here pawaive mudiki, uye Manheru eKisimusi… zvainakidza," Cook zvakataurwa akadaro. “Wanga usina chokwadi chekuti chii chichave pasi. Haa, uchave musi weKisimusi kwekanguva. ” Isu zviri pachena kuti tichamirira imwe nguva yemota ine Apple, asi zvataurwa zvichangoburwa kubva kuApple CEO zvinowedzera mafuta mumoto.
Munguva yeApple's Q4 2016 mhedzisiro yemari, Apple CEO Tim Cook akapindura mibvunzo yakawanda maererano neApple Pay, Siri uye zvakanyanya kukosha, iyo Apple Car. Nepo CEO asina kusimbisa kana kuramba kuvapo kwemotokari yemagetsi inonzi neApple, akati Apple "inogara ichitsvaga nzira dzatingavandudza ruzivo uye ruzivo rwevatengi pazvinhu zvakasiyana zvezvigadzirwa".
"Uye isu tinogara tichitarisa zvinhu zvitsva, uye nzvimbo yemotokari kazhinji inzvimbo iri pachena kuti kune hunyanzvi hwakawanda hungave huchavepo kana kuzokwanisa kugadzirisa ruzivo rwemotokari." akaenderera mberi. "Uye saka zvinonakidza kubva ipapo maonero, asi hapana kune, zvirokwazvo hapana chekuzivisa nhasi."
Semazuva ese, Cook ari kutaura nezvirahwe, asi kana iwe ukaverenga pakati pemitsara, zvinoratidza kuti Apple inogona kunge iine chimwe chinhu chekuzivisa kune imwe nzvimbo pasi pemutsara.
Zvinofungwa nevaongorori nezve hurongwa hwemotokari yaApple
Isu tatozvinzwa kuti Gene Munster anotenda kuti Apple iri kushanda muchirongwa chine chekuita nemota, uye ndokuyambira kumashure muna Kukadzi 2015 kuti yaisazotanga kweanopfuura makore mashanu. Zvinoreva kuti isu tave kunyatsopinda mu 'Apple Car inogona kuvhura chero zuva ikozvino' zone.
Muongorori weGuggenheim Robert Cihra anotendawo kuti Apple iri kushanda mumotokari inozvityaira. Akaudza vatengesi munaJune 2018 kuti aida "kudzokorodza tarisiro yedu yekuti inozoparura mota inozvityaira, zvisinei nekupokana kwenhau uye kunyunyuta kwayo kusvika nhasi."
Cihra haafunge kuti Apple ingagutsikane kuendesa tekinoroji kune mamwe makambani - anofunga kuti Apple ingangoita mota pachayo, ichizopa kutonga pamusoro pekugadzira uye kugadzira, akanyora Iyo Mac Observer yakadzoka muna Chikumi 2018. Cihra akati: "Tichifunga nezve kukura kwemusika uye kufanana neiyo Apple nhoroondo MO, tinoramba tichigutsikana kuti ichazokweverwa mukutanga mota yayo".
Muongorori weBernstein Toni Sacconaghi akanyora muna Chikunguru 2018 kuti "Apple inogona kunge ichishandisa madhora mazana mashanu emadhora kusvika $ 500 bhiriyoni pamadhora ayo mabhiriyoni gumi nemaviri emadhora eR & D kushandisa mukutyaira wega," sekutaura kweCult Of Mac ripoti.
Uchapupu hwekuti Apple iri kushanda pamota yakazvimiririra
Apa ndipo patinonyora mamwe makuhwa ane mukurumbira uye humbowo hunoratidza kuti Apple iri kugadzira mota.
Zvinyorwa zvePatent zvakasarudzika mu-mota mwenje system
Patent, yakatanga kunhongwa na AppleInsider, inoratidza yakasarudzika-yemota mwenje system iyo inogona kupa yakavhenekerwa mota madhoo nezvigaro zvinoshanduka zvinoenderana. Iyo patent yakanzi "Lighting masystem ezvigaro zvigaro" izvo zvakanaka chaizvo. Iyo yepasi tech, kune rimwe divi, iri zvishoma yakaoma.
Per patent, Apple inofungidzira mwenje sisitimu iyo inoshandisa fiber-yakabatana maOD uye maOLED mukati mechimiro, kungave gonhi remota kana kunyangwe chigaro chemota, izere nemataneru emwenje chaiwo kutakura mwenje kutenderedza mota uchivanza kwaunobva.
Kana zvabatanidzwa nema sensors akadzika, zvakare akataurwa mune iyo patent, mhedzisiro ndeye musuwo unoita kunge musuwo - usina zviratidzo zvinoonekwa - unokwanisa kuratidza mabhatani uye kana ma icon pazvinodiwa. Izvi zvinogona, semuenzaniso, kuratidza vafambi uko akasiyana levers ekugadzirisa chigaro, kana kutopa zano vafambi kuti vaise bhanhire ravo kana mota ichifamba.
Ichokwadi inonzwika inotonhorera, asi sekune zvakawanda patent, ichi hachisi chiratidzo chekuti Apple ichasanganisira iyo tech kana / painoburitsa yayo mota. Kufanana nemakambani mazhinji tech, Apple mafaera zvizhinji yezve ramangwana-yakatarisana netekinoroji patent, asi izvi zvinowanzo mumiririra mukufarira zvikwata zveR & D zvekambani pane chimwe chinhu chinozoonekwa pane chishandiso munguva pfupi iri kutevera.
Ex-Apple mushandi akapomerwa mhosva yekuba zvakavanzika zvine chekuita nemotokari kubva kukambani
Injiniya weApple uyo aishanda pachirongwa cheAustralia chemota chakazvimiririra anonzi akaba zvakavanzika zvekutangisa kwekutanga mota yeChinese, uye akapihwa mhosva neFBI.
Xiaolang Zhang akashanda kuApple kubva Zvita 2015 kusvika Chivabvu 2018. Akapomerwa mhosva yekuba zvakavanzika zvekutengeserana muna Chikunguru 2018.
Apple yakaburitsa statement kuVerge kwayakati: "Apple inotora zvakavanzika uye kuchengetedzwa kwepfuma yedu zvakanyanya. "Tiri kushanda nevakuru nezvenyaya iyi uye tichaedza nepatinogona napo kuti tione kuti munhu uyu nevamwe vanenge vabatanidzwa vanozvidavirira pane zvavakaita."
Chikwata cheApple chekuchengetedza chakaona kuti Zhang ndiye aikonzera kutsvagurudza kwakawanda uye kwakanangwa kudhawunirodha mapeji ane ruzivo kubva kudura rekuvanzika. CCTV yekumubaya yekusiya Apple inodzivirira mota lab (panguva yaaifanirwa kunge ari pazororo) akatakura "computer keyboard, tambo, uye bhokisi hombe," zvakataurwa zvakare.
Nyaya iyi yakaburitsa pachena kwete chete kuti chirongwa chemotokari chiri kuenderera, asi zvakare kuti vanhu vazhinji vanobatanidzwa nechirongwa ichi. "Vanosvika zviuru zvishanu zvevashandi veApple vanopfuura 5,000 venguva yakazara vanoburitswa paProjekti," sekureva kwezvinyorwa zveFBI.
Apple kuhaya mota indasitiri veterans uye nyanzvi
Zvichida chiratidzo chakajeka chekufarira kwaApple muindasitiri yemotokari ndiyo nhamba yemabasa akagadzirwa kubva mundima iyi pamusoro pemakore.
Muna Zvita 2018, kambani yakahaya Andrew Kim - mukuru dhizaina kuTesla. Iye akashandawo kuMicrosoft pane dhizaini ye Windows 10 UI iyo HoloLens uye Xbox One S.
Doug Field, aimbove VP weMac Hardware, akabva atamira kuTesla kuti ave mainjiniya emotokari, akadzokera kuApple muna Nyamavhuvhu 2018.
Maererano neWall Street Journal, mu July 2015, Tim Cook akabhadhara Doug Betts, muhondo weindasitiri yemotokari. Doug Betts ane makore makumi maviri neshanu ezviitiko achishandira Nissan neToyota; kubva 25 kusvika gore rapfuura, anga ari mukuru mutevedzeri wemutungamiri weGlobal Quality kuFiat Chrysler Automobiles.
Nyanzvi yemotokari yachinja yavo LinkedIn profile. Anotsanangura basa rake razvino se "oparesheni-Apple Inc.", iyo inogona kuturikirwa seumboo kutsigira mushumo weWSJ. Kune rimwe divi, chirevo ichi chisinganzwisisike chinogona kureva zvinhu zvakawanda.
Iyi yaisave yekutanga mari inoenderana nemota. Kubva Kukadzi 2015, Apple inoita kunge chinyararire-yekusarudza mota maindasitiri nyanzvi - saPaul Furgale, muongorori weSwitzerland uyo akatungamira chirongwa cheV-Charge ichigadzira mota dzekuzvipaka.
Muna Kukadzi 2015, Bhizinesi Insider sosi vakati kuti vashandi veTesla vakanga "vachisvetuka ngarava" kuenda kunoshanda kuApple. Uchapupu kuburikidza neLinkedIn inotsigira uku kuda, iine ma profiles makumi mashanu evashandi veApple vane nhoroondo yeinjiniya kuTesla, kunyanya kuburikidza nema internship. Apple Insider Zvinonzi kuti Tesla CEO Elon Musk akataura kuti Apple iri kuyedza zvakanyanya kuwana maTinla mainjiniya, achivapa iyo $ 250k yekusaina bhonasi uye 60 muzana mubhadharo wedzera.
Zvakare muna Kukadzi 2015, The Korea Times Zvinonzi kuti Apple yaikwezva nyanzvi dzehunyanzvi dzeSamsung kure, kureva nyanzvi muhunyanzvi hwebhatiri; pamwe kushanda pamabhatiri eiyo iPhone, asi zvakare, mishumo inoratidza kushanda pamota-inofambiswa nemagetsi mota yemagetsi. “Vamwe vevashandi vedu vakapinzwa basa neApple. Ivo vava kushanda pamuzinda weApple muSan Jose, ”akadaro mumwe asingazivikanwe mukuru weSamsung, achiti Apple inopa makwikwi emabhadharo uye mihoro mikuru.
Mhosva yakamhan'arwa muna Kukadzi 2015 yakataura kuti Apple yakaita "mushandirapamwe une hukasha" kuvhiya mainjiniya kubva kumagetsi emagetsi bhatiri anogadzira A123 Systems.
The Register Zvinonzi muna Chikumi 2015 kuti Apple yanga ichipa vashandi kumabasa epamotokari panguva yekumhanya zvekuti vamwe vatungamiriri vemadhipatimendi vari kutanga kunyunyuta nezvekurasikirwa kwetarenda.
Nekudaro, naMay 2018, sekureva kwevanhu vanoziva chirongwa ichi avo vakataura neNew York Times musumi, "chirongwa chakatambura nekuchinjika kwakadzokororwa munzira dzakakuvadza hunhu uye zvakatungamira kumazana ekubva kubva kumusoro kwazvo kwenhengo dzinopfuura chiuru makore maviri apfuura."
Izvi hazvireve kuti chirongwa ichi chapera neimwe nzira, zvakadaro.
Doug Field, akasiya Apple mu2013 kuti ajoine Tesla, ikozvino adzokera kuApple kunoshanda nechikwata cheProjekti Titan yemotokari. Munda akatungamira kuvandudzwa kwemotokari dzaTesla panguva yake kukambani.
Project Titan iri kutungamirirwa naBob Mansfield, uyo akange abva pamudyandigere kubva kuApple asi akadzoka kukambani muna 2016 kunoshanda pabasa remota. (Kwidziridzo: Mansfield akarega basa muna Zvita 2020 saka iyo Apple Car timu yatamira kubazi nyowani.)
Mark Rober - ane chiteshi cheYouTube chine chekuita nesainzi nevanyoreri mamirioni 3.4 - arikushandawo neApple pabasa rekutyaira mota, sekureva kwemushumo wakasiyana - saiti iyi yainge yaona mazita aRober pane mbiri patent ine hukama neApple VR mafomu ane chekuita nekuzvifambisa mota.
Apple yekuzvityaira ngarava
Apple ine bvunzo dzezvikepe makumi matanhatu neshanu dzinozvityaira mota uye 62 madhiraivha, according kune macReports mushumo kubva Chivabvu 2018.
Iyo kambani yanga ichiedza mota dzayo dzinozvimiririra muCalifornia kubvira muna Kubvumbi 2017 payakagamuchira mvumo yayo yekutanga kuyedza ipapo uye yanga ichiramba ichiwedzera-kuyedza bvunzo kubva pakatangwa. Zvinonzi Apple iri kuunganidza data rezvimiririra mota software pane kungoita yayo mota, asi iyo kambani yaizoisa mota zhinji mumugwagwa dai yaingoshanda pasoftware?
Apple uye Volkswagen
Mota dzeApple dzisina kutyaira dziri padyo padyo nekuzoitika - asi kwete nenzira zvinoreva kuti tichakwanisa kutenga imwe.
Apple yakabatana neVolkswagen kugadzira mota isina mutyairi yekufambisa vashandi vayo kuenda nekubva kubasa.
A New York Times mushumo kubva Chivabvu 2018 zvinodaro "Apple yakasaina chibvumirano neVolkswagen kuti ishandise dzimwe mota dzemutengesi dzeT6 Transporter kuti dzive mota dzeApple dzinotyaira vashandi."
Nekudaro, sekureva kwevanhu vanoziva nezve chirongwa ichi, zvinhu zviri "kumashure kwechirongwa uye zvinopedza ingangoita zvese zveApple mota timu".
Zvinotaridza senge VW yanga isiri yekutanga Apple kusarudza mumwe wako. Apple yaive, sezviri pachena, yakayedza kurova zvibvumirano neBMW neMercedes-Benz munguva yakapfuura, "kugadzira mota yemagetsi-yega yekuzvityaira," sekureva kwe NY Times zvinyorwa.
Apple mafaira patent yekushanduka kwemamiriro ekunze mumotokari
Izvi zvinogona kuve humbowo hweICar mumabasa, kana chingori chirongwa cheanodzora software inowanikwa kuburikidza neCarPlay kana ramangwana mu-mota interface; kana inogona kunge isiri iyo, nekuti zviitwa zvakawanda zvepamutemo zveApple nemamwe makambani ndezvekufungidzira uye zvingangotungamira chero kupi. Asi kuiswa kwaApple patent (iyo yakauya pachena muna Kubvumbi 2018) yekutonga kwemamiriro ekunze mumotokari zvechokwadi kunoratidza (zvakare zvakare) kuti mota dziri mupfungwa dzekambani.
Iyo patent, nhamba 2018001734, inosanganisira kuchengetedza kwe "yakakwana mamiriro ekunyaradza".
"Sisitimu yekudzora mamiriro ekunze inodzora zvikamu zvakasiyana zvemota kudzora mamiriro ekunze, kusanganisira mawindow magungano, sunroof Assembly, nezvimwe," anonyora AppleWorld. "Inotarisa mamiriro akakwana ekunyaradza anoita kuti tembiricha inofungidzirwa yenhengo dzakasiyana dzemuviri dzinogara uye ichengetedze mamiriro ekunze akasiyana-siyana mukati meimwe kana kupfuura zvikumbaridzo."
Apple exec inoratidza inoteedzera-kutyaira mota mapurojekiti
Ruslan Salakhutdinov, Apple director wezvekuchenjera kwekuchenjera, akapinda NIPI musangano muna Zvita 2017 uye akataura kureba nezve akati wandei mapurojekiti anga achishanda paari. Imwe yakaziviswa kare (sezvakatsanangurwa pazasi) asi akati wandei yaive nhau kune Apple-inotevera yeruzhinji.
Musangano vashanyi vakanzwa nezve software inogona kuzivisa vanofamba netsoka kubva kumifananidzo yekamera kunyangwe kamera ikasaswa nemvura uye munhu anofamba akavharirwa nemotokari yakamira, uye Apple yanga ichiunganidza data yemamepu akajeka edhijitari emota-akakodzera maficha akadai marambi uye mamaki emugwagwa. .
Wired ine kunyora kuzere yehurukuro.
Apple masayendisiti anoburitsa kutsvagurudza pamota dzinozvityaira
Yin Zhou naOncel Tuzel, vaviri vema computer masayendisiti anoshandira Apple, akaburitswa tsvakurudzo muna Mbudzi 2018, mune nzira dzinogona kushandiswa nemotokari dzoga kuti dzidzivise kubonderana nevanofamba netsoka nemabhasikoro.
Tsvagiridzo, yakatumirwa kumagazini yepamhepo arXiv.org, inopa software inonzi VoxelNet, "generic 3D detection network iyo inobatanidza kuburitsa maficha uye kusunga bhora kufanotaura mune imwe nhanho, yekupedzisira-kusvika-kumagumo inodzidziswa yakadzika network". Sisitimu iyi yaona mhedzisiro inovimbisa, masayendisiti anoshuma, asi yakaedzwa mukuenzanisa chete, kwete munzira.
Chinyorwa ichi chinopa mazano ekuti Apple inogona kunge iri padyo nechiziviso chine chekuita nemota dzinozvimiririra, kunyange hazvo zvinonzwisisika kuti kambani iri kurerukirwa pachivande chayakatemesa kune vaongorori - chimwe chinhu chakaita kuti zvinyanye kuomera kuhodha manhamba anotungamira. muAI, avo vanoshandiswa kune mutemo wekuvhurika mune zvedzidzo.
Apple inyore tsamba kuUS yekufambisa vatongi nezveyako-yekutyaira mota mitemo
Nepo vazhinji vaitenda kuti Apple yakanga iri kubva pachirongwa chemotokari chakazvimiririra, tsamba yakanyorerwa vatyairi vekuAmerica vekutakura nemutungamiriri weApple yezvigadzirwa kutendeka Steve Kenner angangodaro. Apple sezviri pachena yakataura kuti yaive "inofara nezve kugona kweanogona kuita masisitimu munzvimbo zhinji, kusanganisira kutakurwa" uye kuti paive ne "zvakakosha nzanga dzemagariro emotokari" kuti zviitike.
Mutauriri weApple akasimbisa kuti tsamba (muna Zvita 2016) kuNational Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) yakakurudzirwa ne "inorema kudyara mumishini yekudzidza uye masisitimu anodzivirira" uye kuti yaida kubatsira kutsanangudza maitiro akanakisa muindasitiri ichienda mberi.
Tsamba iyi inokurudzira vatongi kuti vasaunze mitemo yakawandisa maererano nekuyedzwa kwemotokari dzinozvityaira, ichiti "vagadziri vakasimbiswa uye vatsva vanofanirwa kurapwa zvakafanana". Kenner zvakare anoratidza kuti makambani anofanirwa kugovana dhata kubva mutsaona uye padhuze-kupotsa kuti vagadzire yakazara yakazara mufananidzo kupfuura zvingaitwe nekambani imwe chete, zvichibatsira kugadzirisa masisitimu.
Ehezve, neApple ichinyanya kutarisisa kuvanzika kwevashandisi, zvingave zvisina hunhu kusazvitaura mutsamba. Kenner anoti zvakavanzika zvemunhu hazvifanire kukanganiswa nekugovaniswa kwedata, uye kuti vatongi "vanogadzirisa matambudziko epachivande ane chekuita nekuunganidzwa, kushandiswa, uye kugovaniswa kwedata remotokari".
Apple yakapa wega-kutyaira mota mvumo muCalifornia
Ichitevera tsamba yaApple kuNHTSA mukupera kwa2016, Apple yakapihwa mvumo iyo inoita kuti kambani iedze mota dzakazvimirira mumigwagwa yeruzhinji muCalifornia.
Maererano ne iyo Wall Street Journal muna Kubvumbi 2017, iyo mvumo inoregedza Apple kudzokorodza matatu 2015 Lexus SUV neese tekinoroji inodikanwa yekuzvityaira kutyaira. Iyo mvumo inobvumidzawo kuti vanhu vatanhatu vagare mumotokari panguva yekuyedzwa uye vanogona kutora kutyaira kana / pazvinenge zvakakodzera.
Izvi zvinoratidza kuti Apple yanga ichiitisa bvunzo dzakabudirira pamakwara akavharwa uye inoda kunyatso sundira sisitimu nekuyedza mumigwagwa yeruzhinji uko kune zvimwe zvinowirirana nehurongwa hwekutyaira hwekutonga.
Apple ichiri kuvandudza yega-kutyaira iCar, kana iri kuyedza tekinoroji yekuzvimiririra yevamwe vagadziri kuti vashandise? Sarudzo mbiri idzi dzinogoneka, asi ichave iri nguva tisati taziva chokwadi
'Injini dzemheremhere' dzakanzwika pakati pehusiku paApple Car kambasi
Kana Apple isiri kugadzira mota, runyerekupe urwu runenge rwakaomarara kutsanangura: AppleInsider Zvinonzi muna Kukadzi 2016 kuti mumwe munhu anogara padyo nekambasi yeApple isingazivikanwe muSunnyvale (inofungidzirwa kuti ndiko uko Apple irikugadzira mota yayo) akanyunyuta nezve "ruzha rwemota" rwunouya kubva panzvimbo usiku.
“[Panofanira kunge paine] ruzha rwemotokari na11: 00 manheru husiku senge husiku hwapfuura? Kunyangwe neiyo windows yakavharwa ndanga ndichiri kuzvinzwa, ”mugari anonzi akadaro.
Nekudaro, mugari anogona kunge akanganisa - kuvaka kurira kunonzwika kwakafanana nekumutsiridzwa kweinjini, kunyanya chinhambwe. Gore rapfuura, Sunnyvale yakapa mvumo kuApple ichibvumidza kambani kuvaka "isina mawindo garaji garaji" pane chimwe chivakwa chinoshanda neApple, saka zvinogona kuti ndizvo zvakanzwikwa - kunyangwe nei kuvaka kwacho kwaizoitika husiku chinhu chisinganzwisisike.
Zvakakoshawo kuziva kuti kana Apple iri kuvaka mota yekufananidzira panzvimbo iyi, ruzha rwunogona kunge rwuri ruzha rwemashure nemagayo anodikanwa kuumba simbi, inozivikanwa nekuita ruzha.
Apple inotenga mazita ane chekuita nemota
Sezvo kutanga Zvinonzi neMacRumors muna Ndira 2016, zvinoita sekunge Apple yatenga mazita akati wandei ane hukama nemota mazita anosanganisira apple.car, apple.cars uye apple.auto. Kutenga kwacho kwakaitika muna Zvita 2015 uye kwakaunzwa kubudikidza neIndia, sevhisi inowana ruzivo maererano nemazita echisimba uye kero dzeIP
Whois zvinyorwa zvakagadziridzwa musi wa8 Ndira 2016 kuratidza kuti Apple yakanga yanyoresa iwo maseru kuburikidza nemunyori weMarkMonitor Inc, kunyangwe hazvo zvichikosha kuziva kuti hapana imwe yenzvimbo dzakanyoreswa dziri kushanda pari zvino
Kunyangwe izvi zvingaite senge yekusimbisa kuti Apple iri kushanda paApple Car, zvinogona kunge zvisiri izvo; Apple inogona kunge iri kutenga iyo masosi ekushandisa neApple's in-car system, CarPlay. Zvinogona zvakare kunge kumisa vangangoita vanotsotsa vachitsvaga kuti vaite mari kubva kuvanhu muchiedza chazvino Apple Car makuhwa. Kunyangwe izvi zvichitaurwa, Apple yakatenga iCloud.com mwedzi isati yaziviswa uye izvo zvaive zvakare inotorwa na MacRumors.
Apple 'kuyedza mota inozvityaira paHondo Yenyika II yevasungwa'
Project Titan iri munzira, zvirinani zvinoenderana nemushumo waNyamavhuvhu 2015 mu The Guardian.
Pepanhau rakashuma kuti Apple yakatogadzira mota yekuzvityaira, uye ikozvino zvinongoda kuyedzwa.
Kusiyana nevazhinji vagadziri vemota - vakaita seGoogle naTesla - vari kuyedza yavo yekuzvifambisa mota mumigwagwa yeruzhinji, Apple inoda kuramba yakaderera. Izvi zvinoreva kuti kambani inoda mamwe akavharirwa masuo kumashure kwaanogona kuyedza ayo akavanzika mapurojekiti.
Sezviri pachena Apple yawana yakakwana yepamusoro-yakavanzika yekuyedza base. Kudzoka muna Chivabvu 2016, sekureva kweGuardian, mainjiniya eApple akasangana nevakuru kubva kuGoMentum Station, Hondo Yenyika II-epoch yakashandura nzvimbo yemahombekombe pedyo neSan Francisco.
Nzvimbo yacho inonzi inogara mamaira makumi maviri ezviitiko zvezuva nezuva zvekufambisa veruzhinji, kubva munzira huru kuenda kumagirosa emombe; kuongororwa kwaro kwemaawa makumi maviri nemaviri nemauto ane zvombo kunodzivirira veruzhinji kubva pakurota zvakapoteredza nzvimbo iyi. Sekureva kwevakuru veGoMentum, hwaro ihwo "chivakwa chikuru kwazvo chekuyedza pasi rose".
Zvisinei, zvakakosha kutaura kuti chirevo chakaburitswa chakawanikwa neGuardian chine chinyorwa chakakumbirwa kuruzhinji nezve musangano pakati pechikwata chaApple nevakuru veGoMentum.
Hapana kutaurwa nezveApple iCar, uye chiratidzo chinoburitsa pachena chinobva kuna Apple injinjiniya Frank Fearon, uyo akati: “Tinoda… tinoda kunzwisisa nguva nenguva nekuwanika kwenzvimbo iyi, uye nemabatiro atingaite kubatana mapato anga achishandisa [GoMentum]. ”
Chii chichava Apple Car chimiro?
Kunyangwe zvakaoma padanho rino kuratidza akakosha maficha emota iri kuuya yeApple, chirevo kubva kuBusiness Insider munaGunyana 2017 chakatipa tarisiro yezvinodiwa nevashandi vari muchirongwa kuti mota ipe.
Per mushumo, Apple mainjiniya anofungidzirwa aine:
Otomatiki madhoo anovhura nekuvhara chinyararire
Iyo yemukati isina vhiri kana mudhiraivho (izvo zvaizoreva kuti mota inofanirwa kuve yakazvimiririra zvizere)
Yechokwadi- kana yakawedzera chokwadi chakavakirwa mukati mekuratidzwa kwemukati kwezvinangwa zvevaraidzo
Mahara mavhiri aibvumidza mota kutyaira divi
Kuvandudzwa kweanonyanya kufadza kutyaira system kutsiva iyo clunky LiDAR sisitimu inoshandiswa nemamwe makambani kugadzira mota dzinozvimiririra
Ehezve, chirongwa ichi chinonzi chakachinja kosi kubva ipapo saka maficha aya anogona kutadza kuve kwenguva yakati rebei, asi hazvireve kuti Apple haizoenderera mberi nekugadzira mota kana yapedza iyo 'CarOS' system pachayo.
Apple in-mota varaidzo sisitimu zvirongwa
Nepo vazhinji vakataura kuti Apple iri kushanda pamota yakazvimiririra (kana sisitimu yekutengesa kune vamwe vagadziri), a ripoti kubva kuBusiness Insider uye zvakataurwa nemuongorori Steven Milunovich zvinoratidza kuti chimwe chinhu chingave chakachengeterwa vateveri vemota.
BI nguva pfupi yadarika yakawana hofisi yeApple yakavanda muBerlin iyo iri kunge yakazvipira kutakura vachishandisa mainjiniya akapihwa kumakambani emota Asi ko kana kambani iri kushanda pane zvinopfuura mota chete - ko dai yaivandudza mu-mota varaidzo sisitimu?
Muongorori we USB Steven Milunovich akakurukura Project Titan na Horace Dediu na Neil Cybart ndokumutsa nyaya nhatu:
Kutakura kwakakura kupfuura IT uye hutano, maindasitiri maviri Apple atove akadzika mukati.
Imba muridzi wemota inogona kudonha nekuzvimiririra kutyaira.
Iyo kambani iri kuvaka hunyanzvi mune yepamoyo sensor, kutyaira uye mepu tekinoroji.
Mhedzisiro ine musoro? Project Titan "inogona kunge iri yekufambisa chikuva - kwete mota, asi chiitiko chose", Milunovich akataura.
Iyo pfungwa inonakidza; kana mota mune ramangwana dzichikwanisa kuzvityaira, vanenge varimo vanenge vachiitei? Zvichida kuti vafambi vangangoda imwe nzira yevaraidzo, kutaurirana uye maapplication kuti vagare vakabatikana - chimwe chinhu Apple chinopa nemamwe majaira.
Nezvese zviripo, mota inodawo Wi-Fi, kubatika kwebandband, ruzivo rwekufambisa uye nehurongwa hwayo hwekushandisa - zvese zvinopihwa nekambani.
Sanganisa izvo nerunyerekupe rwechiri kuuya Siri-inogoneswa smart speaker kukwikwidzana neAmazon's yakakurumbira Alexa-powered Echo. Hazvina kuoma kufungidzira ramangwana umo Siri inodzora uye inoshandisa mota yako, ichikupa iwe-senge mushandisi yemushandisi yekudyidzana nayo.
Kungoti shuttle yemushandi
Kana Apple inogona kungozvivakira yega mushuttle mushandi pasina chishuwo chekuishandura kuita chirongwa chevatengi.
Sezvambotaurwa, a New York Times mushumo kubva Chivabvu 2018 vakati "Apple yakasaina chibvumirano neVolkswagen kuti ishandise dzimwe mota dzemutengesi dzeT6 Transporter kuti dzive mota dzeApple dzinotyaira vashandi."
Zvinotaridza kuti zvirongwa zveApple zvekugadzira mota yemagetsi-yega yekuzvityaira neMercedes Benz neBMW, zvakadonha, sekureva kweshumo.
Chii chiri kukwikwidza Apple?
Apple haisi yega kambani inofarira mota…
Chirongwa cheGoogle chakadomwa Waymo. Iyo kambani inotaura kuti iri "kuvaka izwi rine ruzivo kupfuura mutyairi" pane yakatsaurirwa webhusaiti pano.
Zvinoenderana neBusiness Insider mabviro muna Nyamavhuvhu 2017, kuvandudzwa kweApple yekuzvimiririra yekutyaira tekinoroji iri padanho rakafanana neGoogle makore matatu apfuura. Kwayakabva kunonzi kunozivana nehunyanzvi hwezvirongwa zvinoverengeka zvemota zvakazvimirira, uye yaona tekinoroji yemotokari yeApple kutanga.
Kwayedza inoti "Apple iri kungoedza kutamba kubata" kunyangwe payakatangisa mukutanga tekinoroji yekuzvityaira, zvichiratidza kuti hurongwa hwemotokari yeApple haugone kuenda sezvainge zvakarongwa.
Iyo Apple iCar ichaita sei?
Kana Apple ikasarudza kugadzira mota kuti ishande neayo otomatiki ekufambisa sisitimu, ichave nekutaridzika kwakafanana kune Google's isina kutyaira pod-dhiraira mota? Mhinduro ndeyekuti hapana anoziva zvechokwadi.
Apple inoenda kune yakanyanyisa kureba kuti ichengetedze ruzivo rwezvigadzirwa zvayo isati yaburitswa uye isu hatitarisiri chero chakasiyana neICar. Rinenge riri zuva rinotonhora mugehena Apple isati yaendesa chigadzirwa chayo chakapedzwa pamberi pekuzivisa!
Zvakadaro, vanhu vanowanzo tsanangura zvigadzirwa zveApple seyakanaka - uye isu tinofunga kuti Apple ichatanga mota iyo vanhu vachatanga kudanana nayo ... kana ichizarura mota.
Rangarira mota yakatakurwa neApple kumashure muna2015 iyo munhu wese yaiti yaive yakazvimiririra, asi yainyatsoshandiswa 'kugadzirisa Apple Mamepu'? Yakaonekwa zvakare, kunyangwe paine misiyano inozivikanwa.
Vhidhiyo yakagovaniswa pa Twitter na @macjshiggins inopa kutarisisa-kumusoro kweApple Hardware iri pamusoro peLexus SUV. Inogona kunge iri vhidhiyo ipfupi, asi inotipa tarisiro pane iri kushanda nekambani.
Higgins, iyo poster yevhidhiyo uye mubatanidzwa weimwe kambani inozvimiririra yemotokari inonzi Voyage, inoti iyo hombe padenga Hardware inogona kunge iine "yakawanda yeiyo compute stack". Izvi zvakasiyana nedzimwe mota dzinozvimiririra, idzo dzinowanzoisa iyi Hardware mubhuti remota.
Izvo zvinoitawo kuti zvive nyore kwazvo kuendesa iyo tech pakati pemotokari, yakanaka mamiriro panguva yekuyedza iyo tech kune akawanda mota.
Motoring webhusaiti TopSpeed ​​ine yakagadzira yekufungidzira kupa yezvazvinofungidzira kuti iCar ichataridzika. Kunyangwe izvi zvisiri nenzira yekusimbisa kuti Apple iri kugadzira mota, kana iyi ndiyo nzira iyo ichatora, zvinonakidza kuona kuti avo vari muindasitiri yemotokari vanofungidzira kuti Apple yemhando yepamusoro mota yemagetsi ichaita senge.
Uyezve, bhenji rinopenya reApple raitaridzika serakanaka, handiti?
Hazvirevi kuti Apple haina kuisa patent munzvimbo ino. Zvingaita sekunge iro ruoko rwekutsvagisa nekusimudzira rweApple ranga richitsvaga tekinoroji yemotokari kweanopfuura makore gumi neakawanda ari kuwanikwa ne Chitendero cheMac.
Imwe patent yakadaro, yakamisikidzwa mu2011, yaizokutendera kuti uzarure mota yako uye utange injini yako kubva kune iDevice senge yako iPhone kana iPad.
Imwe patent inonakidza, yakamisikidzwa mu2009, inoratidza dhizaini ine-mukati kamera kamera tekinoroji - zvayakagadzirirwa ndeyekufungidzira kwechero munhu, asi isu tinogona kufungidzira kuti ingangoshandiswa kuona ruoko rwekugona runogona kudzora mashandiro emota, senge yekuvharira system kana mwenje wemwenje.
ichi kutanga kwegore ra2012 inotarisa pane kumisikidzwa kwemotokari. Inoedza kugadzirisa dambudziko rekuti vanhu vazhinji vangashandisa sei mota imwe asi vachiri kugadzikana. Mhinduro iyo Apple yakauya nayo? Shandisa iPhone kuronga mushandisi zvishuwo kubva pachigaro chigaro kusvika pakukodzera tembiricha kune dzinodiwa nhepfenyuro - zvakafanana (asi zvisina kumbofambira mberi) kune izvo Range Rover inoita nekuyeuchidza chigaro chinodiwa chevatyairi mune yayo Sport modhi.
Apple inoenda nhanho imwe ichienda mberi neiyi patent - iwe unogona kutora mumotokari yemumwe munhu uye uine zvakafanana zvaunofarira iwe mumotokari yako pakarepo yakamisirwa iwe.
Imwe patent inotsanangura uchishandisa kugona kweiyo geolocation ye iPhone kuongorora uye kudzora mamwe mota mashandiro anoenderana nema geofence. Pfungwa iyi ndeye kushandisa masaini anotumirwa kubva ku iPhone yako kuenda, semuenzaniso, kuvhura mota yako paunenge uchisvika pairi uye nekuikiya iwe paunenge uchienda. Mamwe mabasa epatent iyi anogona kusanganisira kuvhura bhuti iwe paunomira kumashure kwemota - chiitiko chinonyatso batika pakubata!
Iyo yazvino patent, yaive rakabudiswa muna Nyamavhuvhu 2017, Inotsanangura sisitimu inoshandisa maseru eBluetooth ekutaurirana kwemota-nemota. Iwo ma sensors anogona, mune dzidziso, kutaurirana nemota dziri padhuze, sensors uye GPS system yekumisikidza iwo madhibhodhi edhiraivhi kuratidza zvipingamupinyi senge mota munzvimbo yako isingaone, kana mota dzepedyo dzepedyo.
Iyo patent haitsanangure iyo tekinoroji semota inozvityaira, asi pachinzvimbo ichiienzanisa neyechinyakare vhezheni yemaseru ekupaka uye mapofu-mavara anobatsira anowanikwa pamotokari mukugadzira nhasi.
Apple iCar runyerekupe: Mutengo
Kunyangwe pasina mutengo wakasimba wakaziviswa, tinogona kutarisa mota yazvino yaTesla tofungidzira kuti iCar yaizove mutengo wakafanana - sezvo makambani maviri ari kuita kunge anokwikwidza indasitiri yemotokari.
Tesla's 2015 Model S, kambani yemagetsi yemagetsi ichangoburwa inopa mari inokwana £ 67,980 ne "tech pack", chimwe chinhu chatinofungidzira kuti iCar yaizouya seyakajairwa. Kana Tesla iri bhenji, ipapo iCar zvirokwazvo haizove yakachipa asi chichava chinhu cherunako.
Chikwata chevaongorori vetekinoroji vanobva kuJefferies & Co vakanda ngowani mumhete, vachiratidza kuti zvavanofungidzira kuti uchave mutengo weApple iCar. Chikwata chakaratidza kuti iCar ingangove nemutengo wemitengo unosvika madhora zviuru makumi mashanu nezvishanu, izvo zvinoshandura kusvika pamakumi matatu ezviuru zvemadhora panguva yekunyora. Izvo zvinoita kuti ive inenge hafu yemutengo weTesla's Model S muUK, iyo inogona kupa iyo kambani-yakaumbwa michero mukana unodiwa zvakanyanya muindasitiri yemotokari yemagetsi.
Apple Car: Chii chiri kutora nzvimbo neApple kupinda mune mota mota?
Mota dzinozvityaira: Autonomous kutyaira yakatsanangurwa
Apple Mepu Mota Dzinotanga Kuongorora Connecticut, Mifananidzo Inogona Kubatsira Apple Inodzivirira Yekutyaira Ekuedza
Apple VR headset kuburitswa zuva, mutengo & specs makuhwa
Tim Cook Anosimbisa Apple Kutarisa pane Autonomous Driving Systems